တရုတ်နိုင်ငံ Pony.ai ကားကုမ္ပဏီက ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် မောင်းသူမဲ့ကားများစမ်းသပ်မောင်းနှင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိ - Xinhua News Agency
လော့စ်အိန်းဂျလိစ် ၊ မေ ၂၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Pony.ai က အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့သုံးမြို့၏ လမ်းမများပေါ်တွင် ဘေးကင်းစွာဖြင့် လူလိုက်ပါခြင်းမရှိ‌သော မောင်းသူမဲ့ကားများကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရန် ကယ်လီဖိုးနီယားပြည်နယ် မော်တော်ယာဉ်ဌာန(DMV) ထံမှ ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။BMV ၏ ကြေညာချက်အရ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ Fremont ၊ Milpitas နှင့် Irvine မြို့သုံးမြို့တွင် အများပြည်သူသွားလာသော လမ်းမပေါ်၌ မောင်းသူမဲ့ကားအား စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရန်အတွက် Pony.ai ကုမ္ပဏီအား မေ ၂၁ ရက်က ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်၊
“ Pony.ai ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်ခြင်းနဲ့အတူ ယာဉ်စမ်းသပ်မောင်းနှင်ဖို့ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားတာပါ ၊ အထူးလမ်းမတွေပေါ်မှာ ယာဉ်မောင်းမပါဘဲ နောက်ထပ် ကား မော်ဒယ် ၆ ခုကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်ဖို့ ကုမ္ပဏီကို ခွင့်ပြုမိန့် အသစ်ချပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်များကို ကားလမ်းမပေါ်တွင် ကန့်သတ်အရှိန် တစ်နာရီ ၄၅ မိုင်နှုန်း ( ၇၂.၄ ကီလိုမီတာ) ထက်မကျော်ဘဲ ကြည်လင်ရှင်းလင်းသော ရာသီဥတု နှင့် အလင်းရောင်အောက်တွင် စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုထားသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် မောင်းသူမဲ့ကား စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း ၅၅ ခုကို ခွင့်ပြုချက်ပေးထားပြီဖြစ်ကြောင်း DMV က ပြောကြားခဲ့ပြီး ၊ သို့သော် Pony အနေဖြင့် အခြားသော တရုတ်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် AutoX ၊ Baidu နှင့် WeRide ၊ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Cruise ၊ Nuro ၊ Waymo နှင့် Zoox တို့နောက် ၈ ခုမြောက် ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် Nuro ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကသာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၌ စီးပွားဖြစ် မော်တော်များကား ထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ကျိုး နှင့် ဆီလီကွန်ဗေလီတွင် အခြေစိုက်ထားသည့် Pony.ai ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အများပြည်သူအတွက် မောင်းသူမဲ့ကား နှင့် အလိုအလျှောက် မိုဘိုင်းဖုန်း ကားလမ်းညွှန်စနစ် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ပထမဆုံး ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Chinese startup Pony.ai approved to test driverless vehicles in California
LOS ANGELES, May 22 (Xinhua) — Chinese autonomous vehicle startup Pony.ai has receivedapermit from California’s Department of Motor Vehicles (DMV) to test its driverless cars without human safety drivers behind the wheel on specified streets in the state’s three cities.
According toastatement released by DMV, the permit issued to Pony.ai on Friday authorized the company to test driverless vehicles on public roads in Fremont, Milpitas and Irvine.
“While Pony.ai has had state authority to test autonomous vehicles with safety drivers since 2017, the new permit allows the company to test six autonomous vehicles withoutadriver behind the wheel on specified streets,” the statement read, noting the testing vehicles were permitted to operate on roads with speed limits not exceeding 45 miles (72.4 km) per hour in clear weather and light precipitation.
A total of 55 companies had active permits to test driverless vehicles in California, the DMV said, but Pony is the eighth company to receiveadriverless testing permit, joining fellow Chinese companies AutoX, Baidu, and WeRide, along with U.S. companies Cruise, Nuro, Waymo, and Zoox.
Nuro is the only company so far to receiveadeployment permit that allows it to operate its autonomous vehicles in California commercially.
Pony.ai, which is based in Guangzhou and Silicon Valley, claims it is the first company to launch autonomous ride-hailing and provide self-driving car rides to the general public in China. Enditem
People take photos ofadriverless vehicle duringadriverless vehicle winter challenge competition ataforest park in Changchun, northeast China’s Jilin Province, Jan. 12, 2021.
အမေရိကန်နိုင်ငံ မီနီရ်ပိုလစ်မြို့တွင် သေနတ်ပစ်မှုကြောင့် လူ ၂ ဦးသေဆုံး၊ ၈ ဦးဒဏ်ရာရ